Mandany toerana fanariam-pako bilidaozera TYS165-3HW - China Xuanhua Construction milina
TYS165-3HW bilidaozera dia 165 horsepower lalana-karazana hydraulic mivantana dozer amin'ny fiara, semi-henjana mihantona sy hydraulic manampy miasa, mpanamory hydraulic vary fanaraha-maso sy ny tokan-tena no mamily sehatra fanaraha-maso sy ny braking. TYS165-3HW bilidaozera dia miavaka amin'ny avo mahomby, misokatra fijery, optimisé rafitra, mora fandidiana sy ny asa fanompoana amin'ny vidiny ambany kalitao sy azo antoka manontolo. Izany no vokatra fanavaozana ny fako fikirakirana miasa. Specifications Dozer T ...
TYS165-3HW bilidaozera dia 165 horsepower lalana-karazana hydraulic mivantana dozer amin'ny fiara, semi-henjana mihantona sy hydraulic manampy miasa, mpanamory hydraulic vary fanaraha-maso sy ny tokan-tena no mamily sehatra fanaraha-maso sy ny braking.
TYS165-3HW bilidaozera dia miavaka amin'ny avo mahomby, misokatra fijery, optimisé rafitra, mora fandidiana sy ny asa fanompoana amin'ny vidiny ambany kalitao sy azo antoka manontolo.
Izany no vokatra fanavaozana ny fako fikirakirana miasa.
(tsy ao anatin'izany ny Ripper) Operation lanja ( Kg) 192200
Ground tsindry (K Pa ) 41.1
Track habetsahan'ny (MG) 2300
Min. tany fangatahany fahazoan-dalana (MG) 373
Dozing fahafahana ( m ³) 4.6
Blade sakany (MG) 4222
Max. nandavaka lalina (MG) 400
Lafiny ankapobeny ( MG ) 5528× 4222× 3 190
Misy laharana revolisiona (ny rpm) 1850
Flywheel hery ( K W / HP ) 121/165
Max. Torque (N • m / ny rpm) 830/1100
Misy laharana fandaniana solika (g / KW • h) ≤ 218
N umber ny lalana rollers ( isaky ny lafiny) 6
P kongonina (MG) 203
W idth ny kiraro (MG) 800
Mihemotra (Km / h) 0-4. 33 0- 8.90 0- 14.96
Max. rafitra tsindry (MPa) 12
Previous: Mandany toerana fanariam-pako bilidaozera SD7HW
Next: Mandany toerana fanariam-pako bilidaozera TYS165-3HW
Ala bilidaozera SD6G